HLQ Induction Heating Machine, induction equipments manufacturer
HLQ INDUCTION EQUIPMENT CO., LTD (Zita rekare: DaWei Induction Heating Machine Co., Ltd) inonyanya kugadzirisa Induction Kuchenesa michina uye michina yemagetsi yekugadzira uye kushambadzira kweanopfuura makore gumi nemashanu. Iwo michina inovhara otomatiki Surface Kuomesa & Yekutapisa Machina, Ultrasonic epurasitiki yekuwachisa muchina, ultrasonic simbi welder, Mhepo Yakapora Induction Kuchenesa Machina, Flexible Brazing Systems, Auto Induction Kugadzira Choto, yakazara induction kuomesa system, Aluminium uye Mhangura Inopwanyira Midziyo, Yakakwenenzverwa Yekunamatira Kurapa Systems Inoshanda. Tube Welders & Thermal Kusimudza Maitiro. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mukupisa kwekupisa, kusunga, kusunga, kusunga, kugadzira, kupisa, kupisa uye kupisa mhinduro.Transistor vashanduri kubva 15Hz kuenda ku500MKHz frequency & IGBT masimba emagetsi kubva pa2.0 kusvika 5 KW.
Induction Kupisa mishonga shandisa zvigadzirwa zvemberi zvemagetsi uye akasiyana akasarudzika-matsva matekiniki Ivo vanogona kupisa simbi nekukurumidza uye zvishoma. Ivo vanogona zvakare kupinda isingaenzanisirwe kupisa simbi kusvika simbi fuse pasina kubata nesimbi
zvakananga. Enzanisa nedzimwe nzira dzekupisa, yedu induction yekupisa muchina ine akawanda mabhenefiti: izere yakasimba mamiriro, kuzvidzora-uye pachako-kudzivirira basa. Inotanga nekumanikidzwa kunodiwa nemvura, kutora nzvimbo yepasi yepasi uye inoda nguva shoma yekutanga uye yekudzima, kudziya zvakachengeteka, zvakapetwa pasina kusvibiswa.
Nekambani kusimudzira, kambani yedu inobhadhara zvakanyanya nekutsvagisa & kuvandudza uye sevhisi mushure mekutengesa. Isu tinoteerera ISO9000-2000 zvakanyanya mukugadzirisa kwedu. Kambani yedu inohwina mukurumbira wakanaka wemuchina wedu wemhando yepamusoro uye wakanaka.
induction heat catalog